Kachin Duwa: လွတ်တော်တာဝန် ဆိုတာကိုရော သိကြပါသလား?
လွတ်တော်တာဝန် ဆိုတာကိုရော သိကြပါသလား?
ဒီမိုကရေစီ လွတ်တော် တွေမှာက ပြည်ထောင်စု အဆင့်လွတ်တော် ဆိုတာ တိုင်း နဲ့ ပြည်နယ်ထဲက အူမ ချေးခါးမကျန် ပြောဖို့ မဟုတ်ပါ။ တိုင်းဒေသတခုရဲ့ လူနာတင် ယဉ် တစ်စီး ကိစ္စကို ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး မေးကြမြန်းကြမဲ့အစား၊ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး အရေးပေါ်လူနာတွေကိစ္စ ဘယ်လို ကိုင်သွယ်သင့်ကြောင်း၊ ပေါ်လစီ နဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသင့်တာပါ။
လွတ်တော်အမတ်တွေဟာ ကိုယ့်မဲဆန္ဒနယ်က လူထုရဲ့ ထောက်ခံမဲအတွက်ပဲ အလုပ်လုပ်မဲ့ အစား တတိုင်းပြည်လုံး နဲ့ ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး မူဝါဒ ကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။
၀န်ကြီးဌာန အဆင့်ကို ထမင်းတစ်နှပ်စာ ဆန်တောင်းသလို တောင်းနေမဲ့ အစား ၀န်ကြီးဌာန တွေကို လမ်းညွန်မှု ပေးနိုင်တဲ့ ပေါ်လစီ အကြောင်း၊ ဝေဖန်ထောက်ပြ ရ တဲ့ လွတ်တော် ဖြစ်သင့်တာပါ။
အဆုံးစွန်ပြောရရင်၊ စနစ်တခုလုံးရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို ထောက်ပြဝေဖန်လျှက်၊ တကယ်တမ်း သိတတ်နားလည်တဲ့ လွတ်တော်အမတ်များ ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုရင် ခေတ်ကာလ အရ အလုပ်မဖြစ်မှန်း နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်များ ပြောလေ့ရှိတဲ့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်ကို ဘယ်လို လျှော့ချသင့်တဲ့ အကြောင်း၊ လွတ်တော်အမတ်များ ပြောဘို့ အချိန်တန်ပြီလို့ မြင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ထွက်လာတဲ့ အကိုင်းအညွန့်တွေကိုပဲ ခုတ်နေပြီး အညွန့်တလူလူထွက်တတ်တဲ့ ညောင်ပင်လို ပြဿနာ ဆိုတာ ဆုံးတယ်လို့ ရှိမှာ မဟုတ်ပါ။ လူကြီးမင်း လွတ်တော်အမတ်များလဲ အသက်ကြီးသွားမယ်၊ မြန်မာပြည်သားတွေလဲ လွတ်တော်စရိတ်ထောင်းရုံကလွဲပြီး ဘာအကျိုးမှ မဖြစ်၊ နိုင်ငံတကာမှာ မျက်နှာမွဲဘ၀ ကနေ လွတ်လမ်းမမြင်ပါ။
နိုင်ငံတကာ ရင်နှီးမြုပ်နှံ သူဌေးများကို ဖိတ်ခေါ်လို့ ပြီးနိုင်တာ မဟုတ်၊ သူဌေးတစ်ယောက်တိုးလာလေ ကျွန်သက်ရှည်လေပါပဲ။ သူဌေးဖိတ်ခေါ်နေမဲ့ အစား၊ ကိုယ့်ပြည်သူတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပိုအလေးထားသင့်ပါတယ်။
ဘယ်သူ့ကိုမှ မျက်နှာလုပ်စရာ မလိုတဲ့ တရားမျှတမှုဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု မှာ အမှန်ပေါ်လာမှာပါ။ ဖက်ဒရယ် ဆိုတာ ခွဲထွက်ခြင်း မဟုတ်၊ ပေါင်းစပ်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က လူမျိုးမတူတဲ့ သီးသန့်နိုင်ငံ ဖြစ်နေခဲ့ကြတဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံတွေတောင် Confederation အောက်မှာ ညီတူညီမျှ လွတ်လပ်စွာ သွားလာရင်း တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံကြား မှတ်ပုံတင် တချက်ပြစရာ မလိုပဲ ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ လူ့ဘောင်သစ်ကို ထူထောင်ခဲ့ကြတယ်။ ဥရောပကို မကောင်းဘူးလို့ ပြောနေတဲ့လူမျိုးတွေလဲ ဥရောပမှာ အခြေချနေထိုင်ချင်ကြတာချည်းပါ။ မြန်မာပြည်ထောင်စု မှာတော့ တချို့နေရာတွေမှာ မြို့နယ်တခု နဲ့ တခုကြားမှာတောင် မှတ်ပုံတင်ပြနေရတဲ့ အဆင့် ရှိသေးတယ်။
ဒီလိုဘ၀မျိုးဟာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ် နဲ့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ် နဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်လို့ မရပါ။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အစိုးရ၊ သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရ တည်ဆောက်လို့ မရပါ။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး မရနိုင်ပါ။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ် နဲ့ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး လုပ်လို့ မရပါ။ ဒါတွေကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ သာဓက အထပ်ထပ်ရခဲ့ပြီး စနစ်တကျ ဖေါ်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ တသဘောထဲ အမြင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုများ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်ကို ကျုပ်တို့ မြန်မာ့ လွတ်တော်အမတ်မင်းများ အဟုတ်မှတ် နေရင်တော့....
ဒူဝါ ဘာမှ ပြောစရာစကား မရှိပြီ............
Posted by Du Wa at 10:59 PM
မဂျွယ်ရှိန်ရာ ၀န်ပေါင် အစပါ။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ၀န်ပေါင်မြေ အစစ်ပါ။ ဘိုးဘွားများရဲ့ အမွေ၊ အဖိုးတန်ဓန ပြည့်နေတာ။ ငါတို့ပြည်၊ ငါတို့မြေ ငါတို့ချစ်၊ ငါတို့မြတ်နိုးတယ်။ အဆုံးအစမဲ့ ကာကွယ်၊ ကမ္ဘာ တည် သ၍ တည်စေသတည်း။
AWNG PADANG YEHOWA
ကချင် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းထဲမှ ဆွဲထုတ်ပြီး သတ်လိုက်
Duwa Kachin Facebook သို့>>>
Email ကနေ တဆင့် သတင်းရယူရန်
ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး ဆယ်ပုဒ်
သုံးခါဖောရင် ရှောတယ် ဖထီး
နည်းနည်းတော့များသွားပြီဖထီး 'နဂလေးခလာ'ဘယ်သွားမလို့လဲ၊ ပကန့်အာမင်း ထမင်းစားပြီးပြီလား 'နန့်အာမင်း မနက်လာ' ဘာဟင်းနဲ့...
မြန်မာ လူမျိုးများအနေနဲ့ ဗမာမှု ပြုခြင်း နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကို တပြိုင်ထဲ ရယူလို့ မရနိုင်ပါ။ နှစ်ခုထဲက တခုခု ကို စွန့်လွတ်ရမည်။ တို...
ယူအန် က နေ မြန်မာ နိုင်ငံ ကုို နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ် ကျော် အထိ သန်းခေါင် စာရင်း အမှန်အကန် မရှိပဲ အုပ်ချုပ်ေ...
အင်ခါဂါး သို့ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အဖွဲ့ချုပ်သွားရောက် ကူညီ
အင်ခါဂါး ဆိုတဲ့ မချမ်းဘောမြို့အောက် နားမှ အရင်က ကေအိုင်အေ ထိန်းချုပ်နေရာ ဖြစ်ပြီး အခု ဗမာ စစ်တပ် သိမ်းထားသော (ဗိုလ် ဇော်မျိုးထက်ကျသော)၊ နုန်...
မြန်မာ့သမိုင်း ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ မပါတဲ့ ဂျပန်တော်လှန်ရေး
Duwa Kachin ကချင်တွေက ဂျပန် နိုင်လို့ အောင်ပွဲခံ မနောပွဲ (Padang Manau Poi) ကို ၁၉၄၅ မတ်လ ၂၄ မှ၂၆ အထိ ဗန်မော် အထက် စိန်လ...
KIO/KIA အလံ နဲ့ ကချင်အမျိုးသား အလံကုို မသဲကွဲပဲ ကချင်အမျိုးသား အလံ ကုို ကေအုိုင်အေ အလံ ဆုိုပြီး ရောသမ နေခြင်းဟာ ဒီနေ့ခေတ်အထိ မြန်မာအစုို...
အာဇာနည် နေ့အစ မျိုးစောင့် ဥပဒေ က
နုိုင်ငံသား တန်းတူ အခွင့်အရေး ပြောခဲ့လုို့ အသတ်ခံရတဲ့ ဗုိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အာဇာနည် ဖြစ်လာတယ်။ တကယ်တော့ ဗုိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အသတ်ခံရခြင်...
ကချင် လူမျိုးများ ပြောသော ဗမာ စကား (၂)
အရင် အပိုင်း (၁) မှာ ရေးထားတာ က တော့ ဖိရွတ်သံ (accent) နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ကချင်လူမျိုးများ ရဲ့ လေသံကွဲနေခြင်းအပေါ် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ...
ဖက်ဆစ် ၀ါဒ ကိုင်စွဲထားဆဲ...
"ကေအိုင်အေ ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာ ရှိနေတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်တွေ ကူညီထောက်ပံ့ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မပြောခင် သူတို့ ပြောနေတဲ့ ဒုက္ခသ...
ရဲမိသားစုကို ဘာ့ကွောငျ့ အိမျရှပွေ့ောငျးခိုငျးသလဲ
နွေရာသီ လူငယ်ဘောလုံးသင်တန်း လျှောက်လွှာများ စတင်လက်ခံ
ကလေးမြို့တွင် ဒုတိယအကြိမ် ဇိုမီးဂီတပွဲတော် ကျင်းပ
NMSP နှင့် LDU အဖွဲ့တို့ ပထမ ဆုံး UPDJC အစည်းဝေး တက်ရောက်
Myitmakha Media Group
German town on alert as neo-Nazi festival, counter events held
News Analysis: What Does Kim Jong-un Want? U.S. Fears Answer Is ‘GiveaLittle, GainaLot’
'Likeaknife poking my heart': Loss, loneliness and the killing pain of elderly depression
Palestinian lecturer and Hamas member killed in Malaysia
Putin, heir to the Mongol Grand Khans
Bangkok Post: news
Xinhua – China,
Jinghpaw Mahkawn ni (ကချင်သီချင်းများ)
Annau Ni A Lunghkrung
Labu Pan Myiprwi
Myu Tsaw Mahtai
ဒီလ အတွင်း တင်ထားသမျှ
ပြည်သူ့ရဲတွေရဲ့ သူရ သတ္တိ
ရိုးရှင်းသော နည်းပညာ နဲ့ ကြီးမားသော အောင်ပွဲများ
လွတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးသူရ ရွှေမန်းကို ကချင်စီးပွါးရေး လု...
မြို့ပြစီမံကိန်းများမှာ လူမှုတရားမျှတ ရေး ချိန်ခွင်...
ဖက်ဒရယ် စနစ် ဆိုတာ တင့်သင့်မျှတတဲ့ အာဏာခွဲဝေရေးသာ ...
အချိန်မရွေး ဒိုင်ကောက်စားလို့ ရနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ...
နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ အသိကညာ မြင့်မားမှု နဲ့ ...
ဒီကာတွန်းကြောင့် သတိရစရာလေးတွေ တွေးမိတယ်...
Requesting for urgent help
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ နိုင်ငံချစ်တဲ့ အမြင်...
ဗြိတိန် စစ်တပ်အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ မောင်းသူမဲ့...
ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြီးရဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အတွေးအ...
ဒူဝါ ဟော်ဝါး ဇော်လှ ရဲ့ ပြည်ထောင်စု နေ့ အခန်းအနား ...
ပြည်ထောင်စုနေ့ ဆိုတာ တိုင်းရင်းသားတွေ အလိမ်ခံရတဲ့ ...
ပင်လုံစာချုပ်- ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ၁၉၄၇
မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ လက်ပိုက် ကြည့် မနေသင့်ပါ။
ဖါထေး နည်းပညာ ဘယ်ကထွက်၊ စစ်သက္ကသိုလ် ကထွက်။
မြန်မာ မီဒီယာသမားများရဲ့ အကောင့်များကို အစိုးရ နော...
ကချင်လူမျိုး သတ်တဲ့ ဗမာ သူရဲကောင်း များ စာရင်း ထွက...
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု သမိုင်း (အောင်ထ...
အဆမတန် ဈေးကြီးပေးလိုက်ရတဲ့ အောင်ပွဲ တဲ့။
ON location myanmar rocky path-to-peace in kachin ...
ဗမာ စစ်တပ် ကံဆီး ရွာသားများကို လူသား တံတိုင်းလုပ်ေ...
ဗမာ စစ်သားများ မဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်
Kasung and Zup Mai Villagers Flee BA Bombardment
MYU TSAW GINWANG
MANAU SHA DUNG MAKA BYIN PRU WA AI LAM
Buga Shi Htawn
တုိုင်းရင်းသားတွေ ပြောနေတဲ့ Federal Constitution မူကြမ်းထွက်ပြီ။
အမေ (သို့) တုနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာ
Landscape sumla ni
အခြား လက်ရွေးစင် ဘလောဒ်များ
Zarganar of Burma & Burmese People
မြန်မာ အိုင်တီ နည်းပညာ
Norton 360 for Windows 8 / Windows7/ XP / XP Pro / Vista + Trial Resetter 2014
ထိုင်းအစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူတွ မဲရုံတွေကို ပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြ
Myanmar continues assault on Kachin rebels
Buy and Sell in Thailand
Public + i
မြောက်ကိုးရီးယား ဇာတိသွေး၊ ဇာတိမာန်ပြပွဲ
မြန်မာစစ်အစိုးရ ရဲ့ ဆရာကြီး မြောက်ကိုးရီးယား စစ်သည်တော်များရဲ့ ဇာတိသွေး၊ ဇာတိမှန် သရုပ်ဖေါ် ပြကွက်ပါ။ မြ၀တီ နဲ့ MRTV ပြကွက်နဲ့ တော်တော် ဆင်တယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း အကြောင်း မှတ်တမ်း။
Taiwanese Girl's Music Talent
Copyright by Kachin Duwa. Simple theme. Powered by Blogger.